Yiziphi Izindlela Eziphezulu Zokukhula Kwezingxenyekazi ze-SaaS | Martech Zone
Yini ukugxila kwakho kokuqala njengenkampani ye-SaaS? Ukukhula, kunjalo. Impumelelo ye-Skyrocketing kulindeleke kuwe. Kubalulekile ekusindeni kwakho kwesikhathi eside:
Noma ngabe inkampani yesoftware ikhula ngama-60% minyaka yonke, amathuba ayo okuba yisigidigidi sama-dollar amakhulu angcono kune-50/50.
IMcKinsey & Inkampani, Khula ngokushesha noma ufe kancane
Ukukhula kwenyanga ngaphezu kwenyanga kubalulekile ukumboza ukulahleka okuvela ezinkampanini ze-churn SaaS ngokuvamile ezihlangabezana nakho. Ukwehlula okulindelwe nokukugcina uhlaza, sekuyisikhathi sokuthi amasu akho asethelwe ukukhula ngo-2019. Kuhlale kunamasu amasha avelayo, amaqhinga wokugenca ukukhula, namathuluzi wokukusiza ukuthi ukhulise ukukhula kwakho.
Amasu Okukhula we-SaaS
Nawa amasu amasha amasha wokukhulisa ukukhula kweSoftware njengamapulatifomu Wesevisi (SaaS).
Ukushayela Ithrafikhi Nokudala Ukuqwashisa
Ukuthola okuqukethwe okulungile phambi kwezithameli ezifanele - Njengoba kungenzeka ukuthi uzwile, okuqukethwe kuyinkosi futhi kusenjalo, ikakhulukazi nge-SaaS. Abasebenzisi balindele imininingwane eminingi ekubasizeni ukuthi bathathe isinqumo sokuthenga futhi balindele ukuthi umkhiqizo wakho ube nezinga eliphezulu legunya. Ukuthuthukisa okuqukethwe okulungile okuheha futhi kugcine abathengi abangaba khona bahlanganyele kubalulekile. Ungasebenzisa amathuluzi afanaI-Spyfu futhi I-Google Keyword Planner ukunquma ukuthi ayini amagama akho aphezulu aphezulu, iziphi izithameli zakho eziqondiwe ezisesha. Amasu ambalwa abelana ngokuqukethwe kwakho njengokuthunyelwe kwezivakashi kwenye ibhulogi enezithameli ezifanayo, kusetshenziswa amapulatifomu afana nalawa Medium nokushicilelwa, nokusebenzisa izikhangiso nokukhuthaza ukufinyelela phambi kwezithameli ezifanele.
Usebenzisa i-Personal Branding - Isu lokukhula elivame ukunganakwa lisebenzisa ukufaka uphawu komkhiqizo kwabasunguli bakho kanye nochwepheshe beqembu lakho ukufinyelela kangcono izethameli. Abantu bathanda ukuxhumana nokufunda kubantu bangempela online. Uma othile ovela eqenjini lakho enekhono noma ubuchwepheshe obunganikeza ngemininingwane ethile ewusizo, kuyindlela enhle yokwazisa ngomkhiqizo wakho ungahlosile nangeqiniso. Kunenqwaba yabaSunguli ababhala kwiMedium, Quora, abanye banama-blog series abo noma ama-podcast anikezela ukuqonda okuningi izilaleli zakho ezizobhekelwa kuzo zizoba nentshisekelo kuzo. Kwakha ukwethembana, ukuthembeka, kanye nokuxhumana komuntu nomkhiqizo wakho. Ukwabelana nje ngalokho okwaziyo nokuhlangenwe nakho onakho kungakusiza ukuthi ufinyelele ngokomzimba futhi ubandakanye izithameli zakho ezihlosiwe.
Ukunikezela ngethuluzi lamahhala noma insiza - Elinye isu elihle lokukhula ukuhlinzeka ngethuluzi lamahhala noma insiza kwiwebhusayithi yakho eheha ikhasimende lakho elihlosiwe futhi liqhubeke libabuyise futhi linikeze umkhiqizo wakho igunya elithile. ICoschedule yenze umsebenzi omuhle impela ngokwenza ifayili le-Isheduli Yesiphathamandla seCosched lokho kukuvumela ukuthi uhlaziye isihloko esiyinhloko sokuthunyelwe kwebhulogi ngqo kusayithi labo. Ngokushintshana, bacela i-imeyili yakho. Isihlaziyi esiyinhloko senza umqondo ophelele kubabukeli babo. Ungakha ithuluzi elifana naleli ukuze izilaleli zakho ulisebenzise noma ungenza okuthile okulula njengokuhlinzeka umhlahlandlela wokuthi ungayenza kanjani into ngokushintshanisa i-imeyili yabo.
Amathuluzi wokusebenzisa izikhangiso - Kunamathuluzi amaningi ongawasebenzisa azokusiza ukuthi uthuthukise indlela odala futhi ubonise ngayo izikhangiso. Ungasebenzisa Ukubhalisa ukufaka kabusha abasebenzisi abeza kusiza sakho isikhathi eside ngemuva kokuthi beshiye isiza sakho. Abasebenzisi abangaphezu kwama-90% abeza kusiza sakho kungenzeka bangabhampi bangaphinde babuye. I-Adroll ibaqondise ngesikhangiso kwenye indawo ngokunikezwa okuqondene nentshisekelo yabo kusayithi lakho. Uma bebheka amaphakheji we-premium, u-Adroll uzobakhomba ngesikhangiso sesaphulelo se-premium bese ebabuyisa. Ikakhulukazi kokuthile okufana ne-SaaS, kuthatha ukuthatha izinqumo ezithe xaxa ukuze uhambe ngokuthenga. Ingxenye enkulu yomzamo wakho izogcina ihamba phambili engqondweni yekhasimende lakho elingaba khona futhi ibuyise imikhondo.
Ukugibela nokunciphisa i-Churn
Thuthukisa ukuqhubeka kwakho kokugibela ngebha yokuqhubeka nezinto zomphakathi - Ingxenye enkulu yokugcina ukukhula ngasikhathi sinye inciphisa ukuqhuma ngenkathi ubhalisela abasebenzisi abasha. Uma ubhalisela abasebenzisi kepha iphesenti elikhulu lehla ngenyanga yokuqala, empeleni awukhuli nhlobo. Le yinkinga enkulu yezinkampani ze-SaaS. Ukuvimbela ukukhwabanisa, qiniseka ukuthi abasebenzisi bazi kahle umkhiqizo wakho kusukela ekuqaleni. Indlela enhle yokuqinisekisa ukuthi abasebenzisi badlula kuzo zonke izinyathelo ezenzekayo zenqubo yakho yokugibela futhi ubagcine kuzo zonke “izifundo” ukufaka uhlu lokuhlola noma ibha yokuqhubeka. Lapho abasebenzisi bekubona lokhu, maningi amathuba okuthi badlule kuyo yonke inqubo futhi bangaphuthelwa imininingwane ebalulekile. Uma ukwazi, faka izinto zomphakathi njengokungeza abangani noma osebenza nabo. Lapho ukubandakanyeka komphakathi kuningi, abasebenzisi abaningi kungenzeka babuye futhi baqale ukusebenzisa izici ndawonye ngokushesha.Funda kabanzi mayelana nokwenza ngcono inqubo yakho yokugibela.
Hlanganisa abasebenzisi abasha nababuyayo ngezibuyekezo - Ufuna ukugcina abasebenzisi kanye nabasebenzisi abangahle bakwazi ukumemezela izibuyekezo zakho nezici ezintsha ukukhombisa ukuthi iqembu lakho lisebenza kanzima ukwenza umkhiqizo wakho. Kwakha ukwethemba umkhiqizo wakho futhi kugcina umsebenzisi ethembekile lapho bekubona unikezela abakucelayo. Zama i-Beamer kusayithi lakho noma kuhlelo lwakho lokusebenza. I-Beamer ingu-changelog ne-newsfeed evuleka lapho abasebenzisi bachofoza ithebhu "Yini okusha" ekuzulazuleni kwakho noma kusithonjana kusixhumi esibonakalayo sohlelo lwakho lokusebenza. Ukusakazwa kwebha eseceleni kwezibuyekezo kuvuleka ngokwakamuva: izici ezintsha, amadili, izibuyekezo, izindaba, okuqukethwe, njll. Kuyindawo emaphakathi lapho ungavuselela khona wonke umuntu. Ungasebenzisa izaziso zohlelo lokusebenza ukufinyelela abasebenzisi kusayithi lakho noma kuhlelo lwakho lokusebenza futhi ubabuyise nezibuyekezo ezijabulisayo. Kuyindlela enhle yokuthuthukisa ukubandakanyeka, ukunciphisa ukukhwabanisa, nokugcina lawo makhasimende “asemaphethelweni” ebuya.
Impendulo kanye Nokumaketha Kontanga
Ukuqoqa impendulo - Ukwakha imikhiqizo ephumelelayo ye-SaaS inqubo yokulalela amakhasimende nokuzivumelanisa nezimo. Kwenze iphuzu lokuqoqa ngempumelelo futhi kaningi impendulo evela kubasebenzisi kuzo zonke izigaba. Kunamathuluzi amaningi angakusiza ekuhlolweni kwe-embed kanye nezilinganiso ezisheshayo kuwebhusayithi yakho nakuhlelo lokusebenza ukuqoqa impendulo elula. Ungasebenzisa i-Beamer ukuqoqa impendulo: abasebenzisi bangashiya ukusabela kwabo namazwana kuzibuyekezo zakho zakamuva kokuphakelayo kwakho ukuze ukwazi ukukala izimpendulo. Ukuqoqa impendulo nokuyisebenzisa kuzibuyekezo nezici ezintsha kuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho uthuthuka kahle.
Ukukhuthaza ukwabelana ngomkhiqizo wakho - Ukufinyelela izethameli eziqondisiwe njengamakhasimende akho amanje, indlela elula ukukhuthaza nokwenza kube lula ngabo ukuthi babelane ngomkhiqizo wakho. Ungacela abasebenzisi ukuthi bameme abasebenzisi abaningi ngokushintshana ngokuthile. Ekuqaleni, iDropbox ikucele ukuthi wabelane ngesixhumanisi sabo nabantu abayi-5 noma abayi-10 futhi uthole isikhala sokugcina esengeziwe kuDropbox ngokushintshana. Kwaphumelela ngokwendalo. Kwenze kube lula ukwabelana ngomkhiqizo wakho ezinkundleni zokuxhumana noma nge-imeyili. Abasebenzisi abaningi bazokwenza lokho ikakhulukazi uma kukhuthazwa ngenzuzo efana nesici esengeziwe (indawo yokugcina yeDropbox), isilingo eseluliwe, noma isaphulelo.
Izinhlelo zokumaketha ngokudluliswa - Indlela elula yokungena phambi kwabasebenzisi abaningi njengabasebenzisi bakho bamanje ukusebenzisa abasebenzisi bakho bamanje njengabameli bomkhiqizo wakho ngokusebenzisa izinhlelo zokumaketha zokudlulisa. Kukhona amathuluzi afanaReferralCandy lokho kungakusiza ukuthi usethe kalula uhlelo lokudlulisa lomkhiqizo wakho futhi abasebenzisi bakho bamanje nabathandi bakusiza uthengise ngenkathi nabo bezuza. Ubufakazi bezenhlalo nokubuyekezwa kontanga kunamandla; amazwi abo ayakholisa ukudlula awakho! Unganikela nangokuhlinzeka ngokudluliselwa kwakho kanye nabathintekayo ngokuqukethwe nezinto zokusiza ukuthengisa kangcono umkhiqizo wakho. Amathuba mahle impela asebevele benokufinyelela kuzethameli ezihlosiwe. Bazokuxhumana nabo ngendlela eyiqiniso futhi eyiqiniso ongayenza ngezikhangiso.
Noma ikuphi kwalokhu kulula kakhulu ukukusebenzisa okumbalwa kungasiza ukukhulisa ukukhula kwakho ngokushesha okukhulu ngo-2019. Banikeze isibhamu bese ubalungisa ukuze bahambisane nezithameli zakho eziqondiwe nezinhloso zakho. Ngokwengeziwe, zama iBeamer njengendlela elula yokuthuthukisa ukuzibandakanya kusayithi lakho kanye nokuxhumana okungcono ngokufaka okungenzeka kanye namakhasimende amanje.
Tags: amathuluzi wokwenza kahle izikhangisougongoloUkukhangisa Okuqukethwecoscheduleer headline analyzerimithombo yamahhalaukukhulalokubonisaukunciphisa ama-saas churnukumaketha kokudluliselwasaasukuthola ama-saasukugcinwa kwe-saasisoftware njengensizakalo
Ungayisebenzisa Kanjani i-Zoom H6 yakho njenge-Audio Interface eMevo